Weerar ka dhacay Maali oo lagu dilay siddeed ka tirsan Nabad-ilaaliyaasha QM - Halbeeg News
Weerar ka dhacay Maali oo lagu dilay siddeed ka tirsan Nabad-ilaaliyaasha QM
Ciidamada nabad ilaalinta QM oo maamuusaya 7 askari oo lagu dilay weerar kooxaha Islaamiyiinta ay ku qaadeen sadhigooda oo ku yaalla Kidaal, Waqooyi Bari Maali. Xuquuqda Sawirka: AFP
BAMAKO(HALBEEG)- Wararka ka imaanaya dalka Maali ayaa sheegaya in koox hubaysan ay dishay ugu yaraan siddeed askari oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta Qaramada Midoobay kadib weerar axaddii ka dhacay fariisin ay ku lahaayeen waqooyiga dalka Maali.
Afhayeen ku sugan Maali oo u hadlay Qaramada Midoobay ayaa weerarkan ku tilmaamay mid fuleynimo ah wuxuuna ku baaqay in jawaab adag laga bixiyo.
Weerarkan ayaa dhacay xilli aroor ah subaxnimadii Axadda kaasoo lala beegsaday fariisin ku yaalla Aguelhok oo ku dhawaad 200 KM uga beegan waqooyiga Kidal iyo xuduudda dalkaas uu la wadaago Algeeriya.
Maxamed Saalax Nadiif ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u fadhiya Maali ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ciidamadoodu ay iska caabiyeen weerarka oo ahaa mid aad u abaabulan.
Bishii Abriil ee sanadkii hore ayay ahayd markii weerar kan la mid ah lagu qaaday saladhiggan kaasoo lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta Qaramada midoobay tiro intaa ka bandanna lagu dhaawacay.
In kabadan 13000 oo askari oo Qaramada Midoobay ka tirsan ayaa lagu baahiyay dalka Maali kadib markii maliishiyo islaamiyiin ahi ay qabsadeen waqooyiga dalka Maali sanadkii 2012-kii.
Heshiis ay wada gaareen xukuumadda Bamako iyo kooxaha hubaysan sandkii 2015 ayaa burburay kaddib markii kooxaha islaamiyiinta xagjirka ihi ay gabood fallo badan geysteen sidoo kalena ay weerar ku qaadeen dalalka Burkinafaso iyo Nayjar oo daris la ah dalka Maali.
Shirkii Carabta ee Beyruut oo looga dhawaaqay hirgelinta suuq ganacsi oo xor ah